Archive du 21-janv-2022
Fa misy inona indray ? Nohamafisina ny fiarovana an-dRajoelina
Misy lanjany sy dikany avokoa ny sary sy horonan-tsary avoaka amin’ny fihetsiky ny manam-pahefana sy mpitondra ambony, ary isan’izany ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina.
Efa ny omaly tsy miova toy ny volan-kakafotra ny fomba nitantanana ity firenena ity niainga tany amin’ny tetezamita, mitohy amin’izao vaninandro izao.
Marc Ravalomanana “Raha tena tia ny Malagasy dia mitarika hanao vaksiny”
Nanao vaksiny andiany fahatelo na “3ème dose” teny amin’ny Foiben’ny Firenena Mikambana etsy Andraharo ny Filoham-pirenena teo Marc Ravalomanana mivady omaly.
Traboina mivangongo loatra Zaza iray maty tao amin’ny Gymnase Mahamasina
Zazakely iray volana sy tapany no namoy ny ainy vokatry ny tsy fahampian-drivotra sy hamandoana teny amin’ny Gymnase Mahamasina ny alin’ny alarobia hifoha omaly alakamisy tokony ho tamin’ny 10 ora.
Hisy fiforonana rivodoza rahampitso
Mitohy ny oram-be, faritra maro mety ho tondraka “Azo antoka ny hisian’ny fiforonana rivodoza ny sabotsy maraina. Ny fizotrany kosa dia hahazo ny 1/3 Avaratry ny Nosy avokoa,
Boriboritany fahadimy Ankizy 4 no matin’ny trano nihotsaka
Nidina ifotony nijery ny zava-misy teny amin'ireo toerana ahitana traboina omaly ny Solombavambahoaka lany teny amin'ny boriboritany fahadimy,
Eliana Bezaza “Fitsinjaram-pahefana tsy misy no anton’izao”
Natao hamaly ny filana fototry ny olona ny fitondrana dia ny kibo, ny fitafiana, ny fianarana, ny fahasalamana, ny fonenana, hoy ny sekretera nasionalin’ny antoko politika PSD, Eliana Bezaza.
Voatondro ho namosavy olona Saika niharan'ny fitsaram-bahoaka ilay vehivavy
Vehivavy iray, 47 taona no saika niharan’ny fitsaram-bahoaka ny alarobia 19 janoary lasa teo raha tsy tonga faingana ny mpitandro filaminana mivondrona amin’ny Force de Défense et de Sécurité ao amin’ny faritra Manakara.